Impilo Yangokomoya Elungile Ibuyisela Abantu Endleleni Eyiyonayona | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Nisahambe ibanga elincane kabi endleleni yekholwa elikholelwa kuNkulunkulu, futhi nisazongena endleleni eyiyona, ngakho liselide kakhulu ibanga ngaphambi kokufinyelela ezingeni likaNkulunkulu. Kodwa manje, isimo senu asenele ukuba nihlangabezane nezimfuno zaKhe. Ngenxa yesimo senu kanjalo nemvelo yenu enizelwe nayo eyonakele, ngaso sonke isikhathi niphatha umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki futhi ningawuthatheli phezulu. Nansi into eyinkinga yenu enkulu enisilele kuyona. Phezu kwalokho, anikwazi ukuthola indlela kaMoya oNgcwele. Iningi lenu aliqondi futhi alikwazi ukukubona lokhu ngokucacile. Nangaphezu kwalokho, iningi lenu alikunaki lokhu, futhi alizimisele nakakhulu ngalokhu. Uma niqhubeka nokuziphatha ngale ndlela futhi ningawazi umsebenzi kaMoya oNgcwele, lapho-ke indlela eniyithathayo njengamakholwa kuNkulunkulu izoba yize leze. Lokhu kungenxa yokuthi anenzi konke okusemandleni enu ukugcwalisa intando kaNkulunkulu, futhi anisebenzisani kahle noNkulunkulu. Akukhona ukuthi uNkulunkulu akakasebenzi kuwena, noma ukuthi uMoya oNgcwele akakakushukumisi. Ukuthi wenza izinto ngokunganaki futhi awuwuthatheli phezulu umsebenzi kaMoya oNgcwele. Kufanele ushintshe izinto ngokushesha bese uhamba indlela eholwa nguMoya oNgcwele. Lesi yisihloko esiqavile sanamuhla. Le "ndlela eholwa uMoya oNgcwele" ukuba abantu bathole ukukhanyiseleka emoyeni wabo, babe nolwazi ngezwi likaNkulunkulu, bathole ukucaciseleka ngendlela ephambi kwabo, futhi bakwazi ukungena eqinisweni kancane kancane, bese bethola ukumqondisisa uNkulunkulu. Indlela eholwa nguMoya oNgcwele ngokuqavile ukuba abantu babe nokuqonda okucacile izwi likaNkulunkulu, kungekho kuphambuka kanye nezinkoleloze ukuze bakwazi ukuhamba kuyona. Ukuze nikwazi ukufinyelela kulesi simo, kuzodingeka nisebenze ngokubambisana noNkulunkulu, nithole indlela eyiyo enizohamba ngayo, futhi nihambe ngendlela eholwa nguMoya oNgcwele. Lokhu kufuna ukubambisana ohlangothini lwabantu, okusho ukuthi, enikwenzayo ukufeza izimfuno zikaNkulunkulu ngani, kanye nendlela eniziphatha ngayo ukuze ningene endleleni efanele yokukholwa kuNkulunkulu.
Kuzwakala kuyinto elukhuni ukuhamba endleleni eholwa nguMoya oNgcwele, kodwa uzothola ukuthi inqubo ecacile uma indlela yokwenza icace bha kuwena. Iqiniso ukuthi abantu bangakwenza konke lokho uNkulunkulu akufunayo kubona—akazami ukufundisa ingulube ukucula. Ezimweni zonke, uNkulunkulu ufuna ukusombulula izinkinga zabantu athukulule nezinkathazo zabo. Abantu kufanele bakuqonde lokhu; bangadidwa uNkulunkulu. Indlela kaMoya oNgcwele ukusebenzisa izwi likaNkulunkulu ukuze kuholwe abantu. Njengoba bekushiwo ngaphambilini, kufanele ninikele izinhliziyo zenu kuNkulunkulu. Lokhu kuyisidingo esiqavile sokuhamba indlela eholwa nguMoya oNgcwele. Kufanele nenze lokhu ukuze ningene endleleni efanele. Pho umuntu uyinikela kanjani inhliziyo yakhe kuNkulunkulu ngenhloso? Uma nibuzwa ubukhona bukaNkulunkulu futhi nikhuleke kuYena empilweni yenu yansuku zonke, nikwenza lokhu ngokungaqikeleli—nikhuleka ngenkathi nisebenza. Ingabe lokhu singakubiza ngokunikezela ngezinhliziyo zenu kuNkulunkulu? Nicabanga ngezimo zasekhaya noma izinto zenyama; izinhliziyo zenu zihlezi zicazeke kabili. Ingabe lokhu kungabukwa njengokuthulisa izinhliziyo zenu ebukhoneni bukaNkulunkulu? Lokhu kungenxa yokuthi inhliziyo yakho ihlezi igxile ezintweni ezingaphandle, bese ingakwazi ukuphendukela kuNkulunkulu. Uma nifuna ukuba izinhliziyo zenu zibe nokuthula phambi kukaNkulunkulu ngokweqiniso, kufanele nizimisele ukwenza umsebenzi wokubambisana. Okuchaza ukuthi, ngamunye ngamunye wenu kufanele azinikeze isikhathi ekude nabanye abantu, izindaba, nezinto ukuze nizinikele esikhathini senu sokuthandaza, lapho nizokwazi ukuletha ukuthula ezinhliziyweni zenu nithule nithi du phambi kukaNkulunkulu. Kufanele nibe namanothi enu nganodwana lapho nizobhala khona ulwazi lwenu lwezwi likaNkulunkulu kanye nokuthi umoya wenu uthinteke kanjani, kungakhathalekile ukuthi lokho enikubhala phansi kujulile noma cha. Thulisani izinhliziyo zenu phambi kukaNkulunkulu ninenhloso. Uma ungazinikeza ihora elilodwa noma amabili empilo kamoya yangokweqiniso osukwini, lapho-ke impilo yakho ngalolo suku izoba ngenothile futhi nenhliziyo yakho iyoqhakaza futhi icace. Uma uphila lolu hlobo lwempilo kamoya nsuku zonke, lapho-ke uyokwazi ukunikela inhliziyo yakho kuNkulunkulu kakhulu nakakhulu, umoya wakho uyoba namandla nakakhulu, isimo sakho siyokuya ngokuya siba ngcono, uyokhula kakhudlwana ukwazi ukuhamba indlela eholwa nguMoya oNgcwele, kanjalo noNkulunkulu uyothulula izibusiso eziningi nakakhulu phezu kwakho. Inhloso yempilo yenu yangokomoya ukufuna ngenhloso kanye nokuthola ubukhona bukaMoya oNgcwele. Akukhona ukugcina imithetho noma ukwenza izinqubo zezenkolo, kodwa ukuphila nibanye noNkulunkulu kanye nokuqondisa umzimba wenu unithobele. Nakhu okumele abantu bakwenze, ngakho kufanele nizinikele ngako konke ukuze nikwazi ukwenza lokhu. Ngale nkathi kukuhle ukusebenzisana kanti nomfutho owufakayo umningi, kungale nkathi uzokwazi ukuphendukisela inhliziyo yakho kuNkulunkulu, futhi kungale nkathi uzokwazi ukuthulisa inhliziyo yakho ithi cwaka phambi kwaKhe. Uma usufinyelele isimo esithile, uNkulunkulu uzozuza inhliziyo yakho ngokuphelele. Akekho oyokwazi ukukuthonya noma ukuthumba inhliziyo yakho, futhi uyoba ngokaNkulunkulu ngokuphelele. Uma uhamba ngale ndlela, izwi likaNkulunkulu lizozambula kuwena ngaso sonke isikhathi futhi likukhanyisele kuyona yonke into ongayiqondi—konke lokhu kungafezeka ngenxa yokubambisana kwakho. Yingakho uNkulunkulu ehlezi ethi, "Bonke ababambisene naMi, Ngizobavuza ngokuphindwe kabili." Kufanele niyibone le ndlela ngokucace bha. Uma nifisa ukuhamba endleleni eyiyona, kufanele-ke nenze konke enikwazi ukukwenza ukuze nenelise uNkulunkulu. Kufanele nenze konke eniokwazi ukukwenza ukuze nizuze impilo yangokomoya. Ekuqaleni, ungangakwazi ukufeza nokuncane kulokhu, kodwa akufanele uzivumele uhlehle noma usibekelwe ukungabi nathemba—kufanele uqhubeke nokusebenza ngokuzikhandla! Ngale nkathi uphila impilo yangokomoya, kungale nkathi inhliziyo yakho izogcwaliseka ngamazwi kaNkulunkulu, ihlezi ifuna izindaba zikaMoya futhi ihlezi ikhathazeke ngalokhu. Emva kwalokho, ungadalula ukujula kweqiniso elisenhliziyweni yakho kuNkulunkulu ngempilo yakho yomoya, umtshele lokho ofuna ukukwenza, lokho okade ucabanga ngako, ukuqonda kwakho nokubona kwakho izwi likaNkulunkulu. Ungafihli lutho, ngisho nokuncane! Zejwayeze ukukhuluma amazwi angaphakathi enhliziyweni yakho kuNkulunkulu, Mtshele iqiniso, unganqikazi ukukhuluma okusenhliziyweni yakho. Ngale nkathi ukwenza lokhu kakhulu, kungale nkathi uzobuzwa ubuhle bukaNkulunkulu, nenhliziyo yakho izodonseleka kakhulu nakakhulu kuNkulunkulu. Uma lokhu kwenzeka, uzozwa ukuthi uNkulunkulu ungothandiweyo wakho kunanoma ubani omunye. Ngeke uphinde usuke eduze kukaNkulunkulu, noma kwenzekani. Uma wenza lolu hlobo lokuzinikela nokukhulumisana noNkulunkulu nsuku zonke futhi ungayeki ukucabanga ngako, kodwa ukuphathe njengobizo lwakho empilweni, lapho-ke izwi likaNkulunkulu lizogcwalisa inhliziyo yakho. Kuchaza lokhu-ke ukuthintwa nguMoya oNgcwele. Kuzoba sengathi inhliziyo yakho selokhu yayiphethwe nguNkulunkulu, sengathi selokhu kwakunothando enhliziyweni yakho. Akekho ongakuphuca lokhu. Uma lokhu kwenzeka, uNkulunkulu uphila ngaphakathi kuwena ngokweqiniso futhi unendawo enhliziyweni yakho.
Okwedlule: Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubudlelwane Obufanele NoNkulunkulu
Okulandelayo: Izithembiso Kulabo Abaphelelisiwe
Kuyo yonke iminyaka, akekho umuntu oseke wangena embusweni ngakho akekho oke wathokozela umusa weNkathi Yombuso, akekho nowake wabona...
Njengomuntu okholwa kuNkulunkulu, kufanele uqonde ukuthi, namhlanje, ekutholeni umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina nawo wonke...
Wonke umuntu angakwazi ukupheleliswa uNkulunkulu, ngakho wonke umuntu kufanele aqonde ukuthi iyiphi inkonzo kaNkulunkulu ehambisana kahle...
Akuyona yonke into eseBhayibhelini engumbhalo wamazwi akhulunywa nguNkulunkulu mathupha. IBhayibheli lethula izigaba ezimbili zomsebenzi...